Dood baarlamaanka uu ka yeelan lahaa arrinta C/kariim Qalbi-dhagax oo baaqday – Radio Daljir
Seteembar 9, 2017 11:14 b 0
Kulan lagu waday maanta in golaha baarlamaanka Soomaaliya ku yeeshaan magaalada Muqdisho ayaa baaqday, waxaana kulanka uu ahaa mid xasaasi ah oo baarlamaanka doonayay inuu ka doodo gacan u gelinta dowladda Itoobiya sarkaalkii jamhadda ONLF Cabdkariim Sheekh Muuse Qalbi-Dhagax oo abuurtay xiisad siyaasadeed.
Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa sheegay baarlamaanka inuu u baaqday kooram la’ aan.
Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ayaa ku eedeeyey dowladda inay sabab u ahayd baaqashada fadhigii maanta, iyagoona ku eedeeyey inay ciidamo ku goysay xarunta baarlamaanka oo baaritaano waqti lumis ah ku sameeyey xildhibaanada baarlamaanka.
Guddoomiyaha baarlamaanka ayaa dhanka kalle sheegay inuu ka xunyahay xildhibaano fadhiga joogay inay saxiixi waayeen kooramka, waxaana loo balamy mar kale in la isugu yimaado kulanka maalinta beri.
Cabdikariin Qalbidhagax oo ahaa sarkaal sare oo katirsanaa jamhadda ONLF ayay dowladda sheegtay inuu ahaa sarkaal fowdo ku waday amaanka gobolka islamar ahaantaana ay sidaasi darteed dowladda ugu gudbisay dowladda Itoobiya.